Xusuusin 5 wuxuu leeyahay cillad nashqadeed: #pengate | Wararka IPhone
Galaxy Note 5 wuxuu leeyahay cillad nashqadeed oo horay loogu yaqaanay #pengate
Qalabka saxda ah, iyadoon loo eegin nooca ama sumadda, ma jirto. U ogolow inay u sheegaan Steve Jobs #antennagate ama Tim Cook oo leh #bendgate. Joojinta "albaabka" wuxuu asal ahaan ku leeyahay fadeexada Mareykanka "Watergate" waxaana badanaa la adeegsadaa marka shirkad weyn lagu buufiyo nooc kasta oo fadeexad ah, sida kiisaska iphone 4, oo lumiyay baahintiisa markii la geeyay a hab gaar ah, ama iPhone 6 ah, oo sida ugu dhakhsaha badan loo laalaabi karo sida aan jeclaan lahayn. Midka ugu dambeeya ee lagu raaco tareenka albaabka ayaa ah Samsung Galaxy Xusuusin 5.
Shabakadaha bulshada, waxaa horey loogu yaqaanay #pengate to a cillad nashqadeynta kaas oo ay la socoto lakabkii ugu dambeeyay ee shirkadda Koonfurta Kuuriya. Khaladku maahan inuu kululeeyo, ama in qaybaheeda ay soo baxaan ama wax la mid ah. Dhibaatadu waxay tahay in Xusuus-qor 5 ka mid ah qalinkiisa ayaa si khaldan loo gelin karaa godka aan ku hayno mar kaliya oo aan isticmaalnay. Moodelyadii hore, tani suurta gal ma ahayn maadaama, markii la isku dayayay in lagu celiyo meeshiisii ​​booska qaldan, stylus si fudud kuma habboona. Haddaba waa maxay dhibaatadu?
Guuldarradu ma noqon doonto mid culus haddii ay kaliya tahay in qaladka loo khaldo. Dhibaatadu waxay tahay in Xusuusin 5 uu la yimaado S-Pen si fiican u qarsoon ku dabool cirifka. Markaan dooneyno inaan banaanka soo saarno waa inaan sameynaa si fudud u riix aaggaas si stylus uu u sameeyo bood yar oo uu ku soo baxo oo keliya si aan ugu qaban karno farahayaga iyo, haddii aan gadaal u dhigno, farsamadan ayaa joojin doonta shaqada. Marka si khaldan loo geliyo, si aan uga saarno waa inaan isticmaalnaa awood dheeri ah oo gabi ahaanba jebisa nidaamka ogaanshaha.
Shaqada ogaanshaha S-Pen waxaa loogu talagalay inay bilow barnaamijyo kala duwan ama nidaamyo menu marka ereyga la iska saaro oo waliba shaashadda daarto oo la xidho, maaddaama qalabku fahamsan yahay in haddii aad S-Pen la soo baxdo ay tahay inaad isticmaasho Waxyaalahan oo dhami waxay joojinayaan inay shaqaystaan ​​haddaan qalinka dusha ka gelino oo aan mar kale ka baxno. Runtii waa dhibaato haysata xal fudud: S-qalin ha u galin si khaldan.
Samsung wali wax faallo ah kamay bixin cilladda nashqadeynta ee Xusuusin 5. Haddii aad i weydiiso waxa Samsung ay tahay in la sameeyo, waxaan kuu sheegayaa inay ku beddelaan S-Pen macmiil kasta oo iibsaday Note 5 oo codsada. S-Pen waa mid ka mid ah awooda Samsung phablet mana u maleynayo inuu jiro qof jecel inuu lumiyo astaamaha ugu muhiimsan qalabkan. Sikastaba, waxaan arkaa laba ikhtiyaar: hadii aan si rasmi ah loo aqoonsan, marwalba waan ka faa'iideysan karnaa dammaanadda inta ay socoto. Waxaan si fudud u dhihi doonaa aaladda ayaa shaqadii u joojisay sidii la rabay. Ikhtiyaarka kale ayaa ah in si rasmi ah loo aqoonsado, marka waa inay bixiyaan xal.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Android » Galaxy Note 5 wuxuu leeyahay cillad nashqadeed oo horay loogu yaqaanay #pengate
30 faallooyin, ka tag taada
"Guul darradu lama diiwaan gelin lahaa haddii ay kaliya qalad u bixin lahayd stylus." Waxa culus waa akhrinta iyadoo loo eegayo qaladaadka higgaadinta ...
Nabade Joan. Waxaan u arkaa inay ka sii culus tahay in khaladaadka yaryar ee aadanaha lagu sameeyo aan loo dulqaadan karin. Waad ka digi kartaa oo ma isku dayi kartid inaad hoos u dhigto, taas oo ah waxa faallooyinkaagu sameeyo. Sidaad ogtahay, B-ku wuxuu u dhow yahay V-ga fartiisuna way socon kartaa. Waa inaad taas fahanto. Dhinaca kale, si aad u dhaleeceyso qaladaadka higgaadinta waa inaad ku dhejiso bayaankan "haa" lahjad "i".
Salaan iyo mahadsanid akhriska.
Kaftan baan u dhigay, waan ka xumahay waxay kugu dareensiisay xumaan, waxay ahayd inaan isticmaalo erayga XABUUR si aan uga dhigo qosol Cafis lahjad, waa run in heerka GARAADKA qalad qaldan la barbardhigi karo ...
Ah, markaa waa hagaag. Kama lihi sidaan u muuqan karo 😉 Hadday digniin ahayd, waan ka cudurdaaranayaa. Horaa loo saxay. Mahadsanid.
Jozef Barrenechea Velasquez dijo
Jawaab Józef Barrenechea Velasquez
Aniguna waxaan leeyahay…!; qaladkan qaabdhismeed ee aad haysato?… waa wax iska caadi ah in Spen-ku uu ku imaan karo hal qaab oo keliya, sax? ilaa mooyee SPen la beddeli karo mooyee aan la allifin oo ay dhacdo Samsung
Si aad u fahanto waxa aan ula jeedo: hadaad hindiso isku xira hal qaab kaliya ku xirmi kara, wax faa iido ah malahan isku dayga inaad si kale ugu xirto.
Salaan Daanyeel. Si buuxda ayaan u fahmay waxa aad u jeedo, laakiin kiiska aad wax ka sheegayso, maskaxda ku hay in aysan jirin fiilooyin la qaldan karo. Tusaale ahaan, USB-ga. Hadaad isku daydo mahelaysid. 30-pin, USB 3… dhammaantood waa la gelin karaa hal waddo oo keliya ama, haddii kale, sida hillaaca, waa la rogi karaa si aanay taasi u dhicin.
Ah waan horay u qabtay xD!; waxa ay uga jeedaan ayaa ah inaysan jirin qaan ama wax la mid ah halka uu taabto oo la arko inaan la gelin karin ...
Maya, aan aragno, haddii uu haysto waxyaabo uu ku ogaado inuu ku sugan yahay midig ama dhinaca qaldan. Dhibaatadu waxay tahay in qalabka noocan ah loo istcimaalo sidii inuu qalin yahay, okay? Waxaad haysaa buug yar oo qalin ku lifaaqan, markii aad u adeegsatidna, dhaqso ayaad ula soo baxeysaa oo dhaqso ayaad dib ugu dhigaysaa, dhammaantoodna waxay leeyihiin dhaqdhaqaaqyo otomaatig ah. Haddii aad qalin qaldan dhigayso, waxaa hubaal inay dhulka ku dhacayso.
Xaalada qoraalka, ka fikir inaad rabto inaad si deg deg ah u soo saarto, qaado qoraal oo aad si deg deg ah u geliso. Moodelladii hore, markii aad isku dayeysay inaad dhigto ma aadan awoodin maxaa yeelay waxay ahayd (si dhakhso leh oo xun) ayaa la mid ah sidii aad isku dayayso inaad saddex-xagal geliso daloolka laba jibbaaran. Waad ogaan lahayd, waad rogtay oo waad saxday. Xaaladda ogeysiiska 5, haddii aad khalad samayso, waad dhigi doontaa. Dhibaatadu waxay noqon doontaa markaad ka saarto, inaad jebin doonto nidaamka ku xusan qodobka.
Waxaan u tafatiraa inaan faallo ka bixiyo haddii aad tixraaceyso daloolka, sida saxda ah. Ma jiraan wax qoraal ah ama wax jira.
Hagaag, waa uun wixii aan ula jeeday! Horay ayaan u qabtay macnahooda, maxaa yeelay ma jiraan wax (ciyaarta) kaa hortaagaya inaad khalad ka dhigato.
Marka haddii taasi ay tahay fallaar yar oo ku xardhan balaastigga oo tilmaamaya jihada loo dhigayo Qalinka waana intaas ...
Daniel Alvarez Camacho sawir-haye dijo
Pos ii ah qaladka naqshadaynta waxba ee na!; Wixii shay l SPen kaliya hal wado ku heli karto, sax? Hadaan kiiska aheyn, waxaan u maleynayaa Samsung inay dhihi laheyd waa la rogi karaa ...
Jawaab ku bixi Daniel Alvarez Camacho
Jose Luis Nieto Notary dijo
guuldarro? hahaha isku day inaad ku xirato xeedhada foorari ka dibna marka uu jabo eedee soo saaraha hahaha
Jawaab Jose Luis Nieto Escribano
Fran rolex dijo
Waan jeclahay macruufka iyo android labadaba si isku mid ah, laakiin taasi guuldarro ma aha haddii loo sameeyo in hal hab oo keliya lagu galo, marka ha isku dayin inaad tan kale u sameyso, salaan
Ku jawaab Fran Rolex
HAA waa guuldaro halis ah. Haddii laga dhigi lahaa in hal hab oo keliya lagu galo, MA geli karo mid kale. Ma isku dayday inaad USB gadaal u xirtid? Xaq uma lihid maxaa yeelay taasi IS waxay ugu talagashay inay ku soo bandhigto qaab. MAYA, ma jeceshahay macruufka iyo Android si isku mid ah, waxaad u jiheysaa dhanka android iyo samsung sida arigu u jiido buurta
O nl galaas halkii markii horaba caag yar .. hehe
Haddii aad qabtid cayayaanka raad raacaya ama calaamadeynaya nashqadaha Apple ...
Jawaab Aitor Fernández Sandros
Alberto Benteo dijo
Haddii aan tagno waa isku mid ... Xagee Apple ka keenay iPhone 6 oo lagu daray? Waa nuqul ka mid ah noocyada kala duwan ee qoraalka Samsung sababtoo ah sida ay iyagu sheegaan weligood taleefan kuma sameyn doonaan shaashado waaweyn oo waaweyn
Jawaab Alberto Benteo
Morons leh qoraaladan!
Waxay rabaan inay khalad ka helaan SAMSUNG-ga.
QALINKA S MA LAGA QAADI KARO, HADII SAMSUNG UU KU SAMEEYO SIDA LOO QAADI KARO HADABA KU SAMEE SI AMAR AH.
Ku jawaab Carlos Gómez
imisa qof baa ilaah xadiday
Runtu waxay tahay, waxaan u maleynayaa in boggan uu leeyahay qaniinyo wax kasta oo ku saabsan Samsung, waxaa loo maleynayaa inuu yahay bog loogu talagalay waxyaabaha ku saabsan Apple, laakiin waxa aan arko waa had iyo jeer dhaleeceyn xun oo wax kasta oo aan ahayn Aniga shaqsi ahaan waxaan u maleynayaa inay yihiin taageerayaal Samsung ka badan Apple maxaa yeelay ma joojiyaan sheegashada Samsung
Ku jawaab Julian
Aynu wajahno, phablets waxay si rasmi ah ugu dhinteen Xusuusta 3. Hadda waxaa jira oo keliya xarafyo raqiis ah iyo taleefannada gacanta waaweyn ee shaashadda oo isku dayaya inay noqdaan xarago.
Tani waa waxa dhacaya marka naqshada taleefanka ay sameeyaan afar daanyeer.
René valvarez De Díaz dijo
Jimmy Alexander AyalaKevin Campos
Jawaab René Álvarez De Díaz
Waxaan dhahayaa isla wixii aan kajawaabay kumanaanka boggaga Apple ee tufaaxa ah ee ku farxay warkan, isbedelka ay kula noolyihiin waallida Samsung, ma yaqaanaan sida looga hadlo wax kale maxaa yeelay waa nidaamkooda deegaanka. waxay isku celcelinayeen mudo 4 sano ah waxayna sameysanayeen taleefano kaliya naqshadeynta haynta inta hartay.
Waxaan sidaas u idhi, taas ayaan dhihi doonaa, waxaan ahay qof adeegsada XUSUUS QOF KASTA, dhammaantood waa haystay, oo weligay MA KU celin! Waxaan isku dayay inaan banaanka soo dhigo, xitaa si aan ku tala gal ahayn, ugama imaan shil, ama inaan la soo baxo oo aan dhaqso u dhigo sida saaxiibkay kor ku leeyahay.
Sidaa darteed, tusaalahan, in kasta oo ay u oggolaaneyso galinta geddisan, dhib malahan aniga aniga tan iyo 4 sano gudahood waligey ma aanan sameyn, xitaa shil ma ahan, jidka agtiisa, Apple afkiisa waxaa ka buuxsamaya dhibic markii ay dhahayaan DESIGN FASHIL! !! SAMSUNG QALAD !! Waxaan aaminsanahay inaysan khalad ahayn, maadaama buugagan ay kaaga digayaan kiiskan, sidaa darteed ma ahan qalad naqshad, waa naqshadda ay leedahay, way fiicnaan doontaa ama ka xumaan doontaa laakiin waa sidaas oo kale, muddo, iyo Fursadaha ah inaad geliso dhinaca Dambe waxay la mid tahay si kama 'ah u cadayasho ilkahaaga darafka kale ee burushka, ama jarista steak-ka gacanta, kaliya taageerayaasha ayaa buunbuuniya wax walba.
Waxaan ku iri
@Juan: Maxaad dhibaato badan u gaysataa? Ha walwelin! Waad caydaa oo waxaad ugu yeertaa kuwa jecel waxsoosaarka Apple fanboys oo aadan aad uga fogeyn gadaal eh!
Fiiri, tani waa mid aad u fudud: Maalinta Samsung ay samayso taleefanka gacanta galaxy, note, iwm. Nidaamkaaga hawlgalka oo aad ku iibiso waxa tufaaxa ah (shaki kuma jiro inaad nuqul ka sameysay iyo in kale) markaa, maalintaas ayaan la hadlaynaa, intaad sii wadayso xanaaqaaga.
Kani waa iPhone maanta
Way cadahay hadaadan aqoon sida loo dhigo, ha helin wax qoraal ah, ku sii wad iphone.
Ma waxaad u baahan tahay suun cusub oo loogu talagalay Apple Watch-kaaga? Tani waa ikhtiyaar weyn